विरेन्द्रकाे नाेट, महँगाेमा किनबेच – BikashNews
२०७७ मंसिर २ गते २१:५६ रामकृष्ण पौडेल
एक जना महिला मित्रले मैतीदेवि नजिकै घर किन्न लागिछन् । तीन फूटे बाटो भएको धितोमा बैंकले कर्जा दिन मान्दैनन् । सञ्चारकर्मी भएको थाहा पाएपछि बैंकहरु झन टेडिन्छन् ।
साथीभाईसँग सरसापट गरेर र सहकारीबाट कर्जा लिएर घर किन्न लागेकाे सुनाइन् । गाउँबाट आएकालाई सहरियाले पत्याउन्नन् । होस्टैमा हैसे गर्छु भने । थोरै रकम सापटी दिएँ ।
‘मैले बैंकबाट ओडी (कर्जा) चलाएको छु । १४ प्रतिशत व्याज तिरेको छु । साथीसँग म व्याज लिन्न । सकेसम्म छिटो फिर्ता गर्नु’ मैले त्यतिबेला भनेको थिएँ ।
सापटी लिएको तिथिमिति याद छैन, चेक काटेर दिएको थिएँ । खोज्यो भने ठ्याक्कै मिति पनि थाहा हुन्छ । करिव ८/१० महिना पछि उनले पैसा फिर्ता गरिन् । पैसा फिर्ता पाएको मिति याद छ, यसै दशैंको फूलपातीको अघिल्लो दिन।
स्वयम्भू पाउँस्थिति इन्जियिरको अफिसमा बसेर प्रस्तावित भवनको नक्सालाई अन्तिम रुप दिदै थिएँ । साथीको फोन आयो । ‘मुखले केही नभने पनि मनमनले गालिगरिरहनु भएको होला । पैसा जम्मा गरेकी छु, भेटौं न ।’
केही बेरपछि सिटी मल अगाडि भेट्ने कुरा भयो । कोभिडको डरले साथीसँग बस्ने वातावरण पनि भएन । रेष्टुरेन्टतिर पस्ने, कफी खाने प्रस्ताव पनि गरिएन । रसियन कल्चर सेन्टरको अगाडि गाडी साइट लगाएँ । मास्क नखोली फूटपाथमा उभिएर २/३ मिनेट कुरा गर्यौं । साथीले चेक दिने होला भन्ने सोचेको थिए । उनले नोटको बण्डल दिइन् ।
अचेल नोटसँगै कोभिड आउने डर हुन्छ । विश्वासकै बीच नाेट नगनी फ्रन्ट बक्समा हुत्याउन खोज्दै दिएँ । ‘पैसा गन्नोस् सर’ उनले भनिन् । ‘पछि पुगेन भन्नुपर्ला।’
गनेँ । पुग्यो । थन्याएँ । र, मोटर हुँइक्याएँ ।
कोभिड महामारीसँगै बजारबाट ल्याइएका किनमेल केही दिन गाडीमै छोड्ने बानी छ । प्रमाणीत र बैज्ञानिक आधार नभए पनि मिल्ने बस्तुहरु किनेर ल्याएपछि केही दिन गाडी मै राख्दा कोरोना घर भित्र नर्छिला कि भन्ने भ्रान्तीले मेरो मनमा बास पाएको छ ।
त्यो नोटको बण्डल बैंकमा पुर्याउने समय पनि भएन । दशैंअघि त्यसले घरभित्र प्रवेश पनि पाएन ।
दशैंसँगै खल्ती र दराज रित्तए । त्यो विटोले दराजमा ठाउँ पायो । त्यसपछि डेरीदेखि पेट्रोलपम्पसम्म, कागतीदेखि गुर्जो किन्दासम्म अर्थात जहाँ डिजिटल पेमेन्ट हुँदैन, त्यस ठाउँमा ती नोट चल्ल थाले ।
भद्रकालीस्थित सेनाको पेट्रोल पम्पमा भुक्तानी गर्दा चार हजार रुपैयाँ झिकेर दिएँ । काउन्टरको क्यासियर नोट धेरै पटक वल्टाई पल्टाई हेर्यो । मेरो मुखमा हेर्यो । जोरविजोरको झमेलामा नपर्न प्रेस पास गलामा झुण्डाएको थिएँ । परिचय पत्रमा पनि उसले आँखा लगायो ।
अनि, पेट्रोलको भुक्तानी गरेको कागजको चिट/टुक्रो काट्न मानेन । आफूभन्दा पाको आर्मीको सहयोग लियो । ‘यो नोट कस्तो हो’ उसले सिनियरलाई सोध्यो । क्यासिएरलाई नक्कली नोटको शंका लागेछ । ‘यो उहाँले दिनुभएको हो’ मलाई नक्कली नोट कारोबारी झै किटानी गर्यो ।
‘यो राजा विरेन्द्रको पालाको नोट हो । सक्कली हो’ पाका आर्मीले काँचा क्यासिर आर्मीलाई भने । त्यसपछि उनले मलाई हेरेर सफाइ दिन खोजे । र भने– ‘केटाकेटीहरुलाई के थाहा । राजाका पालाका पैसा देख्या पनि छैनन् ।’
पर्समा भएको थप नोटमा ध्यान दिए । सबै नोटमा तत्कालिन राजा विरेन्द्रको फोटो रहेछन् ।
ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि नयाँ नोटमा ज्ञानेन्द्रको फोटो छापिन थालेको, राजा ज्ञानेन्द्र कै पालामा पूर्व राजाहरुको फोटो भएको नोटहरु खिचेर थन्क्याउन र नयाँ राजा छापिएको नोटहरु मात्र बजारमा पठाउन सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको २ दशक पूरा हुन लागेछ । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली नोटमा राजाको सट्टा सगरमाथाको तस्वीर राख्न थालेको, सगरमाथाको तस्वीर छापिएपछि राजा अंकित नोटहरु खिच्ने र नष्ट गर्न थालेको पनि दर्जन वर्ष नाघिसक्यो । तर दुई दशक पुराना नोट मेरो हातमा कसरी पर्यो ? मनमा आयो ।
‘अँ याद आयो । सापाटी फिर्ता आएको पैसा हो यो’ साँच्चै नक्कली परेको भए तीनलाई समाउँथे ।’ भित्री मनको कुरा हो यो ।
उनको हातमा यो पैसा कसरी पर्यो होला ? मनमा अर्को प्रश्न तेर्सियो ।
आशंकापूर्ण तर्क धेरै आए । पेट्रोल हालियो, हिडियो ।
कालिमाटीमा रोकिएर फलफूल किन्न थालेँ । त्यहि विरेन्द्रको फोटो छापिएको नोट दिएँ । व्यापारीले नोट वल्टाई पल्टाई हेर्यो । मेरो अनुहार नहेरी घर्रामा घुसार्यो । मनमा लाग्यो यसले नोट चिन्यो ।
तिहार नजिकिदै जाँदा दराजको विटो सकिदै गएछ । श्रीमतीले भनिन्–‘घरमा पैसा सकिन लाग्यो । बाटो मिलाएर एटीएम छिर्नु ।’
‘तिहार खर्च पुग्दैन’–अल्छी मान्दै सोधेँ ।
‘दक्षिणा दिनसम्म त पुग्ला’ उनले भनिन् ।
भाईटिका सम्पन्न भयो । दिदीवहिनी बीचमा बसेर रमाईला कुरा हुँदै थिए । उनीहरुमा नयाँ खुशी देखियो । तिहारमा माइत आएका चेली त्यसैमा खुशी हुन्छन् । कोभिड महामारीको बीचमा पनि सबै दाईभाईलाई टिका लगाउन पाएकोमा अर्को खुशी थियो । त्यसमाथि दक्षिणामा राजा विरेन्द्र भएको हजार रुपैयाँको नोट पाएकोमा उनीहरुमा थप खुशी रहेछ ।
यो नोट कसको हातबाट आयो ? उनीहरुमा खुल्दुली जाग्यो ।
‘मसँग थिए ती नोट’ म बोलेँ ।
‘दाई मलाई अरु पनि साटी दिनुस्’ बहिनीहरु सीता र जानुकाले एक स्वारमा हतारिएर भने ।
‘छ भने मलाई पनि है’ दिदीले पनि मन्द स्वरमा भन्नुभयो–‘भान्जाले विरेन्द्रको फोटो भएको सबै दरका नोटहरु पाएसम्म संकलन गरिरहेको छ ।’
मलाई भने धेरै मोह भएन । पर्समा हेरेको । विरेन्द्र अंकित थप तीन वटा नोट रहेछन् । ‘यी मेरो हातमा परेका अन्तिम नोट हुन् । एउटा म राख्छु, दुईटा दिन्छु’ निर्णय सुनाईहालेँ ।
हातैबाट खोसेर दुबै नोट सीताले नियन्त्रणमा लिइन् । जानुकाले जोड बलगर्दा पनि उनले बाँडिनन् । मेरो प्यारो सगरमाथा अंकित नोट मैले फिर्ता पाएँ ।
उनीहरुले विरेन्द्रको फोटो भएको नोट महँगोमा किनबेच भईरहेको चाल पाएका रहेछन् । क लेखिएको नोट झनै महँगोमा किनबेच हुने गरेकाे उनीहरूले सुनेका रहेछन् । याे विषय मेरो जानकारीमा थिएन ।
राजा विरेन्द्र छापिएका नोट प्रिमियम मूल्यमा किनबेच हुने गरेकाे विषयले मेरो पनि ध्यानाकर्षण भयो । बास्तविकता के रहेछ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा नोट विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालसँग जिज्ञासा राखेँ ।
‘कुनै पनि नोट अंकित मूल्यभन्दा बढीमा किनबेच गर्न पाइदैन । कानुनतः त्यो दण्डनीय हुन्छ’ उनले भने–‘तर पुराना नोटहरु ऐतिहासिक अभिलेख राख्नेहरुले बढी मूल्य तिरेर पनि किन्ने र राख्ने प्रचलन विश्वभर नै छ । नेपालमा पनि राजा विरेन्द्र भएको नोटहरु धेरै मूल्यका किनबेच हुने गरेको हामीले अनौपचारिक रुपमा सुनेका छौं ।’
बजारमा राजा अंकित नोटहरु नगन्य रहेको उनले बताए । ‘प्रचलित नोटमा शुन्य दशमलव शुन्य १ प्रतिशत भन्दा पनि कम मात्र राजाको तस्वीर भएको नोट पाइन्छ । राजा विरेन्द्र अंकित नोट त झनै विरलै छ’ उनले भने ।
राजा विरेन्द्र भएको लोपाेउन्मुख नोटको विटो हातमा परेर सकियो । मेरो हातमा क५८ ८६०६१६ नोट मात्र बाँकी छ । नोट विभाग प्रमुख रेवती नेपालका अनुसार यो नम्बर भएको नोट अरु कसैसँग पनि हुँदैन । यो नोट मेरो लागि अमूल्य भयो । अब कसैलाई दिन्न, सरकारले खोसेन भने ।
One comment on "विरेन्द्रकाे नाेट, महँगाेमा किनबेच"
HIM BDR SHAHI says:
म सँग राजा बिरेन्द्र पालाको २ ओटा नोट छ।
हिमालयन बैंककाे नयाँ शाखा रुपन्देहीकाे तिलोत्तमामा